Ergayga Qaramada Midoobay ee Soomalaiya oo ku baaqay in arrinta Tukaraq laga wadahadlo | Biyoguurenews.com
Home Wararka Ergayga Qaramada Midoobay ee Soomalaiya oo ku baaqay in arrinta Tukaraq laga...
Ergayga Qaramada Midoobay ee Soomalaiya oo ku baaqay in arrinta Tukaraq laga wadahadlo
Magaalada Hargeysa ,waxaa maanta kulankoodii ugu horeeyay ku yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland Muse Biixi Cabdi iyo ergeyga gaarka ah ee cusub ee xoghyaha ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Niholas Haysom .
Kulankaasi oo saxaafadda aan loo ogoleyn ayaa markii uu soo dhamaaday waxa wasiirka arimaha dibedda ee somaliland Dr; sacad Cali shire uu sheegay in labada dhinac ka wada hadleen iskaashiga qaramada midoobay iyo somaliland ,.
Wasiirka ayaa waxaa uu sidoo kale sheegay in madaxwaynaha iyo ergayga Qaramada Midoobay ay ka wada hadleen nabadgelyada mandiqada iyo wada hadalladii somaliland iyo somaliya .
Dhinaciisana , ergeyga gaarka ah ee xoghyaha ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Niholas Haysom wuxuu sheegay in madaxweyne Muuse Biixi iyo madaxda kale ka wada hadlaan sidii xiisadda Tukaraq ee gobolka Sool loogu dhamayn lahaa hab wada hadal , iyo sidii loo soo celin lahaa wada hadalladii somaliya iyo somaliland .
Deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa waxaa horey dagaal ugu dhexmaray ciidamada Soomaaliland iyo Puntland.
Faah-faahin kale oo dheeraad ah kama bixin labada dhinac kulankoodan maanta ee Hargeysa .
Nicholas Haysom oo bedelay ergeygii hore ee xoghayaha guud ee Qaramada midoobay ee soomaaliya Michael Keating wuxuu hore u soo maray magaalada Garowe oo uu kulan soo kulmay madaxda Puntland .
Waa booqashadii ugu horreysay oo Nicholas Haysom uu ku tago Hargeysa tan iyo intii loo soo magacaabay ergayga gaarka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya.
Previous articleBerbe daawo Hay,ada wadaniga ah ee Havoyoco oo Dood Shaqo,la,aanta Dhalinyarada haysta ah ku qabtay berbera
Next articleHogaamiyaha mucaaradka Baxreyn oo xabsi daa’in lagu xukumay